IVivo Y90: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
IVivo Y90: Uluhlu lwenqanaba elitsha lokungena kwinqanaba lebrendi
IVivo isishiyile neefowuni ezimbalwa kwezi veki zidlulileyo, njenge Inguqulelo entsha ye-S1 okanye I-Z1 Pro. Uphawu lwesiTshayina, enye yezona zidumileyo elizweni lalo nakwinxalenye yeAsia, ngoku lusishiya nefowuni entsha ngaphakathi kuluhlu lwayo lokungena. Imalunga neVivo Y90, esele inikezelwe ngokusemthethweni.
Le Vivo Y90 yifowuni elula, ngaphakathi kwendawo yokungena, kodwa ebonisa uluhlu lwezinto eziphuculweyo, ezenza ukuba zibonakale kweli candelo lentengiso. Ukongeza, njengesiqhelo kwi-brand, iza nexabiso elifikeleleka kakhulu kubathengi.
Ngokumalunga noyilo sifumana isimanga, kuba uphawu lwesiTshayina yazisa inotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi. Uyilo oluqhelekileyo kwi-Android, kodwa oko akubonakali kuluhlu olusezantsi. Ke ukuhlaziywa kwefowuni kuza kuyilo. Ivumela isikrini secebo ukuba sisetyenziswe kakhulu.
IVivo IQOO Neo: Ifowuni yesibini yohlobo
1 Iinkcukacha zeVivo Y90
Iinkcukacha zeVivo Y90
Uyilo lwanamhlanje kunye nokubalulwa okusishiya neenkcukacha ezininzi zomdla. Siyabona ukuba iVivo Y90 ifuna ukuziveza njengeyona nto inomdla ngaphakathi koluhlu olusezantsi lwe-Android. Ke unokuba nethuba lokuthengisa kakuhle kubasebenzisi. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
IsikriniI-IPS LCD ene-6,22-intshi ene-HD + Resolution (1.520 x 720 pixels)
i-ram: I-2 GB
Ukugcina: 16/32 GB (Iyandiswa ngekhadi le-MicroSD)
Cámara traseraI-8 MP nge-f / 2.0 ukuvula kunye ne-LED Flash
Ikhamera yangaphambili: 5 MP ngokuvula f / 1.8
Inkqubo yokusebenzaI-Android 8.1 Oreo eneFunTouch OS 4.5 njengoluhlu lokwahlulahlula
ConectividadI-4G LTE, iWiFi, iBluetooth 5.0, i-GPS, i-microUSB, i-USB OTG, i-3,5 mm jack
UbukhuluUbukhulu: 155,11 x 75,09 x 8,28 mm
U bunzima: Iigram ezili-163,5
IVivo Y90 ibonisa kwangaphambili ukuba uluhlu lokungena kwi-Android unayo. Uyilo lube lwanamhlanje, lusishiya nescreen esikhulu, silandela imeko yangoku kwi-Android. Iprosesa kule meko yenye yeMediaTek, into eqondakalayo, kuba iyanceda ukugcina ixabiso eliphantsi kwifowuni, ibalulekile ekumiselweni kwayo kwiimarike zaseAsia. Sikwafumana ibhetri enkulu kwifowuni, i-4.030 mAh, ethembisa ukuzimela kakuhle kwisixhobo.
Njengesiqhelo, iifowuni ezikweli candelo lentengiso abahlali benesenzwa seminwe. Injalo imeko kule fowuni, ke asinayo, kodwa uphawu lwazisa ukwamkelwa kobuso kuyo, ukubheja okuqhelekileyo kweli candelo lentengiso. Ke lukhetho olufanelekileyo. Apho le Vivo Y90 idanisa khona inkqubo yayo yokusebenza, kuba ifika nge-Android 8.1 Oreo, xa inokuthi isebenzise ngokuchanekileyo i-Android Pie. Asazi ukuba ifowuni iya kuba nakho ukufikelela kuhlaziyo ngaxa lithile, nangona ingenzeki.
Njengesiqhelo kwiifowuni zohlobo, ukumiliselwa kwayo kunqunyelwe eTshayina nakwezinye iimarike zaseAsia, njengeIndiya neIndonesia. Siyathandabuza ukuba le Vivo Y90 iza kuthengiswa eYurophu, njengoko uphawu lungahlali lusebenzisa iifowuni zalo kwezi marike. Ifowuni iphehlelelwe ngemibala emibini: emnyama negolide. Ukongeza, kubonakala ngathi kukho iinguqulelo ezininzi, njengoko sibonile kwinkcazo yazo, ezithi zisungulwe kwiimarike ezahlukeneyo.
Kuba inguqulelo ene-2/16 GB isungulwe e-India enexabiso lama-euro angama-91 ukutshintsha. Ngelixa kwezinye iimarike, ezinjengePakistan, ifowuni ibithengisiwe kuguqulelo olune-2/32 GB, ethi kwimeko yayo ixabise malunga ne-106 lama-euro ukuyitshintsha. Ngokwesiqhelo, zombini ezi nguqulelo zikhutshwa eAsia. Amaxabiso afikelelekayo ke, ngeenguqulelo ezahlukeneyo. Ucinga ntoni malunga neVivo Y90? Ngaba ukhetho oluhle ngaphakathi kuluhlu lokungena lwe-Android?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IVivo Y90: Uluhlu lwenqanaba elitsha lokungena kwinqanaba lebrendi
IXiaomi Black Shark 2 Pro ihamba ngezandla ze-AnTuTu
I-Huawei Nova 5i Pro: Inguqulelo yamanye amazwe ye-Mate 30 Lite